चाणक्य नीति : यी ४ दु:खले मानिसलाई भित्रैबाट गलाउँछ ! | चाणक्य नीति : यी ४ दु:खले मानिसलाई भित्रैबाट गलाउँछ ! |
चाणक्य नीति : यी ४ दु:खले मानिसलाई भित्रैबाट गलाउँछ !
उज्यालो प्रतिनिधि १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार प्रेरक प्रसंग
काठमाण्डौ । आचार्य चाणक्यले नीति शास्त्रमा जीवनसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिएका छन्। चाणक्यका नीतिहरू लिन गाह्रो छ, यद्यपि यी नीतिहरू अk,पनाउनेहरुको प्रगति रोक्न सकेको छैन। धन, प्रगति, दु: ख र खुशी र विवाह सम्बन्धित सबै चीजहरू उल्लेख गरिएको छ।
चाणक्यका अनुसार हरेक व्यक्तिको जीवनमा दुःख छ, तर जीवनमा यस्तै धेरै मोडहरु हुन्छन् जसले व्यक्ति भित्रबाट खरानी बनाउँछ। केहि यस्ता चीजहरूको बारेमा जान्नुहोस्-
यो पनि पढ्नुहोस् ... संघर्षबिना बाँच्ने मानिसहरु कमजोर हुन्छन्
१. जीवनसाथीसँग अलग
चाणक्य भन्छन् कि कुनै पनि मानिस आफ्नो पार्टनर बिछोड हुन चाहँदैन। यस्तो अवस्थामा साथीसँग विच्छेदन भोग्न गाह्रो हुन्छ। पार्टनरको बिच्छेदनले सबै व्यक्तिलाई दु: खी राख्छ ।
२. ऋणको बोझ
चाणक्य भन्छन् कि एक व्यक्ति ऋणको कारण भित्र दबिएको महसुस गर्दछ। चाणक्य विश्वास गर्दछन् कि ऋण लिए पछि एक व्यक्ति अपराध बोधमा बस्न सुरु गर्दछ। चाणक्य भन्छन् कि ऋणको बोझले गर्दा भित्र भित्रै टुटेको महशुस गर्दछन ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... लियोनार्दो दा भिन्ची : जसलाई नजन्मिँदै बाबुले छाडेका थिए
३. आफन्तहरुबाट अपमान
नीतिशास्त्रमा, चाणक्य भन्छन् कि एक व्यक्ति आफ्नै मान्छेले गरेको अपमान सहँदैन। यसले व्यक्तिलाई मानसिक चोट पुर्‍याउँछ। चाणक्य भन्छन् कि मान्छे भित्रबाट चकनाचूर हुन्छ जब आफ्नै मान्छेले अपमान गर्छ र फेरि सामना गर्ने साहस बटुल्न सक्दैन।
यो पनि पढ्नुहोस् ... 'देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सक्ने महान ब्यक्ति भनेको बाबु, आमा र शिक्षक हुन्'
चाणक्यका अनुसार पैसाको अभावले प्रत्येक व्यक्तिलाई कष्ट दिन्छ। गरीबी दु: खको कारण हो। एक व्यक्ति आर्थिक समस्याको कारण भित्र टुट्दछ किनभने ऊ आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम छैन।